AMBALAKISOA TOAMASINA : Jiolahy mpandroba izy roalahy maty voatifitra fa tsy tanora mpianatra
Fanafihan-jiolahy mahery vaika mihitsy no nitranga tao Ambalakisoa Toamasina fa tsy vono olona niniana nataon’ny Zandary na koa resaka ady tamin’ireo samy tanora mpianatra tao anaty “bar” , ny sabotsy maraina 18 janoary lasa teo iny . 20 janvier 2020
Fantatra moa fa jiolahy miisa roa no lavon’ny bala tamin’izany.
Araka ny angom-baovao voaray bebe kokoa dia tokony ho tamin’ny roa ora maraina no nitranga ny fanafihana, tanora miisa dimy, izay telo lahy sy roa vavy handeha hamonjy fodiana no narahan’andian-jiolahy.
Izy telo lahy tafatsoaka saingy izy roa vavy kosa dia niharan’ny daroka , vono sy fanendahana tamin’io fotoana io. Soa ihany fa sendra nandalo tampoka ireo Zandary mpanao fisafoana ny tanàna ka niditra an-tsehatra avy hatrany niaro azy roa vavy ireto. Niezaka nanao tifi-danitra ny Zandary mba hampitahorana sy fampitandremana ireto olon-dratsy saingy vao mainka namaly izy ireo. Nihantsy ady mihitsy raha ny tatitra avy amin’ny Zandarimariam-pirenena tany an-toerana. Voalaza fa fa nampiasa basy sy fitaovana hafa ihany koa ireo jiolahy, nentina nanoherana ireo zandary.
Vokany, tsy maintsy nitifitra ireo mpitandro filaminana ka maty teo no ho eo ihany ny iraika lahy, raha toa ka maty teny an-dalana handeha eny amin’ny hopitaly kosa ny namany iray hafa. Taorian’izay dia noentina tany amin’ny biraon’ny Zandary izy dimy mianadahy voatafika mba hatao famotorana. Nilaza tamin’izany moa izy ireo fa saika maty raha tsy sendra nandalo tampoka ireo zandary niaro sy nanohitra ny jiolahy.
Tsy marina, araka izany, ny filazana fa ady amin’ny samy mpianatra ny zava-nisy ary voaporofo izany, hoy ny fanazavana. Tanora mipetraka eny Ambolomadinika ireo norobaina ary vonona hitsangana hilaza ny zava-misy marina izy ireo tamin’ny vonjy aina nataon’ny Zandary.
Ho an’ny fianakavian’ny maty kosa, dia “ady tao anaty toeram-pisotroana no niavian’io famonoana io. Niady tamina tovolahy miisa efatra ireto tanora roa lahy ireto, ka niafara tamin’ny fivoahana teny an-tokotany ny ady ». “Mety nisy niantso zandary ireo manodidina na koa ny olona nanatrika. Tonga avy any ireo zandary ary avy hatrany dia nampitandrina : “aza mihetsika ambony daholo ny tanana”. Taitra ireo ankizy niady ka tafatoraka hazo an’ireo zandary, avy hatrany dia nanao tifi-danitra indroa ireto farany. Segaondra vitsy taorian’izay anefa tonga dia nitifitra nahafaty azy roa lahy”, hoy hatrany ireo fianakaviana.
Izy ireo izay nilaza tsy handefitra, hoy izy ireo. Hariniaina Gaston, teraka tamin’ny taona 2000 sy Nomenjanahary Théophile, teraka ny taona 1998 ireto namoy ny ainy ireto. Ny iray izay mpianatra eny amin’ny Oniversiten’i Toamasina raha vao afaka bakalorea miandry fidirana kosa ny faharoa. Mpihavana izy roa lahy. Ho hita eo ny ho tohin’ny raharaha.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68231) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (646) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (392) 21 février 2020 Tafakatra 150 000Ariary ny saran-dalana POTIKA TANTERAKA NY LALAM-PIRENENA RN1 BIS (175) 21 février 2020 Lehilahy 01 nanolana zazavavikely miisa 02, misandoka ho tsy salama saina ANDAPA (84) 20 février 2020 Tovolahy iray naratra voafaokan’ny moto, nitsoaka ny nahavanon-doza ANKADIKELY ILAFY (77) 21 février 2020